Seranam-piaramanidina Suvanabhumi (BKK - Suvarnabhumi) Thailand ~ Journey-Assist
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Таиланд » Jeografia, seranam-piaramanidina, famindrana manerana an'i Thailand » Seranam-piaramanidina Suvanabhumi (BKK - Suvarnabhumi)
Seranam-piaramanidina Suvanabhumi (BKK - Suvarnabhumi). Thailand
Ny fijerena ny seranam-piaramanidina Suvannabhumi (BKK - Suvarnabhumi). Thailand
Scheme Airport Suwanabhumi
Seranaabhumi serivisy mifandray amin'ny antsipirihany sy ny fomba hahazoana
Sary sy famerenana amin'ny seranam-piaramanidina
Seranam-piaramanidina Suvanabhumi. Scoreboard an-tserasera
Suvarnabhumi - BKK. Bangkok
Iray amin'ireo seranam-piaramanidina lehibe indrindra eto an-tany sy ny lehibe indrindra any Thailand. Namboarina tamin'ny 2006, 30 km atsinanan'i Bangkok. Suvanabhumi dia tsy mizara ho fiainganana eo an-toerana sy iraisam-pirenena; miasa manodidina ny famantaranandro izany, manompo olona manodidina ny 53 tapitrisa mandritra ny taona.
Ity seranam-piaramanidina ity dia mifandray any Bangkok amin'ny alàlan'ny lalamby haingam-pandeha, izay ahafahanao tonga any renivohitra Thailand in 17 minitra (75 baht). Any amin'ny gorodona ambony amin'ny seranam-piaramanidina no misy azy.
Afaka tonga any Bangkok ihany koa ianao avy any Suvanaphum. amin'ny bus (65 baht). Ankoatra ny Bangkok, ireo bus avy any Suwanabhumi mankany amin'ny seranam-piaramanidina renivohitra hafa - Don Mueang, ary hatrany Pattaya sy Chanthaburi. Tany amin'ny tany amin'ny trano fivoahana isa 8 no haben'ny bus iray.
Misy lehibe koa fitsarana sakafo, miaraka amin'ny vidiny mahatoky sy kalitao feno sakafo. Saingy, mazava ho azy fa feno olona foana izy io.
Toerana ofisialy ny seranam-piaramanidina Suvarnabhumi - BKK
Famindrana na mankany Soraabhumi Airport
Address: 999 Soi Mu Ban Nakhon Thong 1, Nong Prue, Distrika Bang Phli, Samut Prakan 10540, Thailand
telefaonina: + 66 2 132 1888
Lalam-piaramanidina ao amin'ny seranam-piaramanidina Suvanabhumi (rihana voalohany)
Misy toerana fitateram-bahoaka, toeram-pitsaboana, foibe ara-pitsaboana ary fidirana amin'ny lalamby hafainganam-pandeha.
Seranam-piaramanidina Suvanabhumi. Scheme 1 rihana
Ity ny efitrano fahatongavana, adidy tsy miankina, fitaterana fitaterana entana, fitakiana kitapo, fanaraha-maso ny fifindra-monina, fanaraha-maso ny fomba amam-panao, famindrana ary trano fandraisam-bahiny amin'ny hotely. Misy fizarana mankany amin'ny sidina an-trano (Domestialy), ary iraisam-pirenena (iraisam-pirenena), birao ankavia (100 baht isan'andro)
Seranam-piaramanidina Suvanabhumi. Scheme 2 rihana
Ny fidirana amin'ny fiantsonan'ny fiara, ny trano fisotroana, ny fivarotana, ny iray amin'ireo efitrano VIP izay any amin'ny gorodona rehetra.
Seranam-piaramanidina Suvanabhumi. Scheme 3 rihana
Eo ambonin'io gorodona io dia ny efitrano fandehanana, birao fivarotana tapakila fiaramanidina, fanaraha-maso ny fomba mahazatra ny fanaraha-maso ny fifindra-monina, ny trano fisakafoanana, ny teboka famerenan'ny VAT, tsy misy adidy, ny fanampiana voalohany (azo jerena amin'ny gorodona rehetra), ny serivisy very (servisy raha very kitapo), birao havia (100 baht isan'andro)
Seranam-piaramanidina Suvanaphumi. Scheme 4 rihana
Misy rihana faha-5 sy 6 ary faha-7. Fa ny fidirana ao tsy misy pas manokana. Misy birao mivarotra Thai Airways sy Star Alliance, ary koa ny trano fisakafoanana sy ny fitsipi-maso fahitana.
Misy biraon'ny entana an-tsokosoko etsy amin'ny seranam-piaramanidina amin'ny rihana faha-2 sy faha-4. Ny serivisy serivisy fitahirizana dia 100 baht isan'andro.
Fanompoana very fananana, izay eo amin'ny rihana faha-4 akaikin'ny birao fampahalalana.
Seranam-piaramanidina Suvanabhumi amin'ny sarintany, ary antsipiriany momba ny fifandraisana
333 Lalana Cherdwutagard, Srikan, Bangkok, Thailand
Telefaonina: +66 (0) 2 132 1888
Mifindra amin'ny sidina iraisam-pirenena sy an-trano:
Ny safidy voalohany: ny mpandeha iray dia manana tapakila 2 an'ny mpandeha rivotra samihafa. Rehefa tonga ny fiaramanidina dia tsy maintsy miditra amin'ny fanaraha-maso pasipaoro ny mpizahatany, avy eo dia omena entana any amin'ny rihana faharoa (any amin'ny faritra ho tonga). Avy eo, tokony handeha any amin'ny efitrano fivoriana ny mpandeha ary hampiasa ny làlambe hiakatra amin'ny rihana faha-4 (mankany amin'ny faritra fandehanana) - ny fisavana miditra amin'ny fialana anatiny (sy fitakiana kitapo) no natao tao.
Ny safidy faharoa dia ny tapakila mpandeha ny tapakilan'ny mpitatitra iray. Rehefa tonga ny fiaramanidina, tokony handalo ny faritra fitaterana ireo mpizahatany tsy misy entana sy fifehezana pasipaoro (raha toa ka rehefa manidina amin'ny fiaramanidina mankany Thailand, dia nasiana entana ho tonga amin'ny fahatongavan'ilay fiaramanidina). Ilaina ny mamonjy ny pasipaoronao tsirairay sy isaky ny kitapo entinao mandra-pahatonganao eo amin'ny fotoana hahatongavanao.
Findrana any Suwanabhumi
Ny safidy mora indrindra dia ny manao mialoha ny fifindrana avy ao Kiwitaxi. Avy eo ianao dia azo antoka fa hihaona miaraka amin'ny famantarana ao amin'ny efitrano fahatongavan'ireo, hanampy izy ireo hitondra sy hampiditra ny entanao ao anaty fiara, ary rehefa afaka 40 minitra dia ho any amin'ny hotely anao ianao. Paositra fandefasana etsy ambany:
Sulanabhumi Referen Reviewsse valiny (Google review)
Lahatsoratra vao haingana sy hevitra
Seranam-piaramanidina Chic. Ny tsara indrindra hitako. Mafy, saingy azo takarina. Anatiny sy ivelany eo ambony.
Ary misy ny haromotana maimaim-poana amin'ny fametrahana gadget, loharano malalaka amin'ny rano fisotro. Ny seranam-piaramanidina, amin'ny ankapobeny, dia faly)
Seranam-piaramanidina lehibe. Ny fifamoivoizana lehibe dia miainga, avy amin'ny andalana lava. Ny sisa amin'ny seranam-piaramanidina dia mendrika ny isa ambony indrindra.
Tsy ratsy ny wifi maimaim-poana, ny mpanondrana entana ho an'ny entana, fehikibo be dia be. Manampy sy mitsiky ny mpiasa, na dia miteny anglisy fotsiny aza.
Amin'ny fifanakalozana, ny dolara dia voaloa mazava tsara, saingy saika ny seranam-piaramanidina rehetra.
Ny tena tombony azo amin'ny sehatra amin'ny tany. Manakaiky ny gara. Betsaka ny fifanakalozana.
Tsara tarehy, seranam-piaramanidina mahafinaritra. Angamba ny tsara indrindra taorian'ny Singaporeana.
Ary mety fa misy famoahana mivantana amin'ireo bus sy metro.
Ho an'ny 60 baht dia afaka mandeha any amin'ny Khao San Street any Bangkok ianao, eo amin'ny 140 any avaratry Pattaya.
Trano fidiovana madio, valizy avo, tafo maro no hita na aiza na aiza